Izute Queen nke na-abaghị uru ígwè ọrụ na- - News Ọchịchị
Izute Queen nke na-abaghị uru ígwè ọrụ na-
The Swedish mmewe, akpọ 'ndị eze nwaanyị nke shitty robots', ka dọtara ọtụtụ puku na-eso ụzọ ya na ya quirky contraptions maka iri nri ọka ma ọ bụ itinye lipstick
Isiokwu a na-akpọ “Izute eze-nwanyi nke na-abaghị uru robots: 'The internet bụ a weird ebe'” e dere site Amber Jamieson, n'ihi na theguardian.com on Thursday 17 March 2016 16.11 UTC
Mara dị ka "eze-nwanyi nke shitty robots", Swedish mmewe Simone Giertz ewuli robots aka na-eme kwa ụbọchị - ma e wezụga, ha anaghị arụ ọrụ. Ọfọn, mechanically ha na-arụ ọrụ ndị mara mma, ma ya dakwasị Jeruselem na-egosi anyị nwere a mgbe na-aga n'ihu niile gbasara ndụ anyị na-akpaghị aka.
The 25-afọ ndụ on a rụnyere n'ụgbọ mmiri na Stockholm na-agba a nweworo na YouTube chanel na 124,000 debanyere aha, ebe ọ posts videos nke ya surreal na hilarious contraptions, dị ka ígwè ọrụ na-eri nri ya cereal, etinye ya lipstick na iri akwụkwọ nri.
Ya kasị nso-nso video - a isi n'ibi ugboro ugboro megide a keyboard - bụ inyere arụ ụka na internet.
Ọ gwara ndị Guardian banyere ịbụ onye onwe-kụziiri ozi oge shitty robot kere.
Olee ihe mbụ si robot ị wuru?
My enyi Jonathan Lönnqvist na m mere a iPhone ikpe na retractable guitar ndido urụk. Ọ baghị uru ikwu, ọ bụ a mara mma oké ọchịchọ mbụ ngwaike oru ngo. Nke mbụ m mere na dara n'okpuru Atiya "shitty robots" bụ nke a atu okpu agha.
Gịnị mere na ị chọrọ ịmụta otú ka robots?
N'ihi na m nwere ọtụtụ echiche na m chọrọ prototype. m, echiche dị ka manụ salespeople na ọ bụ nanị pụọ ozugbo m na-wuru ha.
Ị mụọ physics na mahadum ma na-tumadi onwe-kụziiri na robotics. Olee otú ị kụziere onwe gị?
Site n'iwuli stof! My mmụta usoro ka mgbe niile echiche na-abara. Ọ dịghị mgbe m nọdụrụ ala na a akwụkwọ ịdị ka, "Ọ DỊ MMA, ugbu a m na-aga ịmụta banyere transistors. "Kama m nwere echiche na m mmasị n'ezie n'ebe ọ na-amụta dị ka m na-agbalị chepụta otú na-ewu ya.
Gịnị bụ n'ike mmụọ nsọ n'ihi gị Kacha ọhụrụ video banyere internet arụmụka?
Ikwu eziokwu, m n'ike mmụọ nsọ n'ihi na otu onye bụ: "Oh m achọ ịma, M mkpa a video n'ihi na nke a izu. "Ma mgbe ahụ, m chetara na m enyi ya m kwuru na m ga-eme ka a facerolling robot nile alụmdi na nwunye amụma m ga-esi. Amaghị facerolling bụ a ihe n'ihu na. The internet bụ a weird ebe.
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe gị iji mee ka a robot?
n'ezie na-adabere. Ụfọdụ n'ime oru ngo m na-dị nnọọ m mmemme a robot ogwe aka, dị ka lipstick robot, na nri ụtụtụ Machine na facerolling robot. Ndị dị ka otu ehihie nke ọrụ. ọzọ na oru ngo, dị ka na kụrụ aka Machine, na-eleghị anya otu izu abụọ ozi oge.
Nke bụ ọkacha mmasị gị robot na ị na-ewu nnọọ?
Na-amasị m na kụrụ aka Machine n'ihi na ọ bụ nke zuru okè Nchikota quirky na creepy. M na-eji ịnyịnya na ụgbọ ala ebu ya nke ọzọ izu na-ele ndị na-eme ọ bụ enweghị atụ.
Bụ nke a now gị zuru oge ọrụ?
Ee, ọ bụ! Oru m enweghị obi abụọ m kasị mma mepụtara otú anya. M nnọọ chọpụtara na niile mgbe ọrụ m na nwere ike gburu m nkwali. Mgbe m chere na ọ bụrụ na m dị nnọọ kewapụrụ onwe m ike na-etinye ihe nke onwe m n'ime ya, ọ ga a fun, ma m apụghị nnọọ inwe otu icheku ọkụ dị ka mgbe m na-arụ ọrụ n'onwe m oru ngo. N'ihi ya, m gbanwere m atụmatụ na kama achọ ịkwa onwe m n'ime a ebu na mere n'ezie dabara, M chere na m ga na-agbalị nnọọ ịgbanwe ebu. M kwụsịkwara na San Francisco, laghachi Stockholm, biri on 0.5 GB nke data a ọnwa na dị nnọọ gbalịrị onwe elu karịa oge o kwere omume na-arụ ọrụ na stof m chere bụ fun. Ọ dịghị mgbe ọ m plan na ihe ga-eyipụ otú ha nwere, M nnọọ chọrọ na-arụ ọrụ na stof dị m ọkụ n'obi, and apparently other people were enthusiastic about them too!
Emela, definitely not. Art scares me. I don’t feel cool enough to be an artist.
The 25 kasị mma egwuregwu nke 2015: 25-21
"Ugboro abụọ Your eBay Sales Na 30 Days!"
Jennifer Lopez laghachi 'arụsị' n'ihi ...
$630,000 US ugwo Zụrụ Facebook Fans
19670	4 Amber Jamieson, Nkeji edemede, Atụmatụ, ígwè ọrụ na-, Technology, YouTube
← Ndị kasị bara uru, Kwesịrị-nwere Atụmatụ na a Car [RANKER] The 25 Hardest Video Games of All Time →